Facebook မှာ အကောင့်ခိုးခံရတယ်၊ Hack ခံရတယ်ဆိုရင် လုပ်ဆောင်ရမယ့် နည်းလမ်းတွေပါ. ~ mgkhainghtoo
kaihtoo siam city
အာမ္ဂးဒးစိုပ် ကေတ်မ္ဂးဒးဂွံ ကေၜာန်မ္ဂးဒးဒ်ှဍာံ
10 များမှာ Myanmar Font & Keyboard (1)
Android Application ရေးသားနည်း (1)
Android Tool (12)
bat file Tools (1)
Bootloader Unlock (1)
clone phone (1)
evasi0n Jailbreak (1)
Flash Tool (1)
Fontchanger Apk (1)
imobile offical Firmware (1)
IOS 7.1.1 JAILBREAK (3)
IOS 7.1.2 JAILBREAK (1)
mon font keyboard (1)
mon keyboard ios (1)
myanmar font (11)
Myanmar Unicode Android (1)
Pattern Lock (2)
root checker (1)
Root Explorer (1)
Root Tool (15)
SAMSUNG GALAXY OFFICIAL FIRMWARE (1)
Smart Zawgyi (1)
Smart Zawgyi Pro (Android Version) (1)
USB Drivers များ (1)
Windows7တင်နည်းစာအုပ် (1)
zawgyi font (1)
မြန်မာ~ထိုင်း စကာပြန် (1)
မောင်ခိုင်ထူး. ขับเคลื่อนโดย Blogger.
BLOG ARCHIVE มีนาคม (2) ตุลาคม (8) พฤศจิกายน (3) ธันวาคม (17) มกราคม (80) กุมภาพันธ์ (30) มีนาคม (10) เมษายน (4) พฤษภาคม (15) มิถุนายน (13) กรกฎาคม (3) สิงหาคม (29) กันยายน (23) ตุลาคม (15) พฤศจิกายน (6) ธันวาคม (32) มกราคม (27) กุมภาพันธ์ (17) มีนาคม (10) เมษายน (20) พฤษภาคม (7) มิถุนายน (11) กรกฎาคม (9) สิงหาคม (5) กันยายน (5) ตุลาคม (7) พฤศจิกายน (1) ธันวาคม (12) มกราคม (4) กุมภาพันธ์ (3) มีนาคม (9) มิถุนายน (1) สิงหาคม (1) กันยายน (2) ตุลาคม (4) มกราคม (3) กรกฎาคม (3) สิงหาคม (1)
Facebook မှာ အကောင့်ခိုးခံရတယ်၊ Hack ခံရတယ်ဆိုရင် လုပ်ဆောင်ရမယ့် နည်းလမ်းတွေပါ.
20:57 မောင်ခိုင်ထူး No comments
Facebook မှာ အကောင့်ခိုးခံရတယ်၊ Hack ခံရတယ်ဆိုရင် လုပ်ဆောင်ရမယ့် နည်းလမ်းတွေပါ....... ပီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက ကျွန်တော့်အကောင့် ဟက်ခံလိုက်ရတုန်းက ဒီအတိုင်းပဲ ပြန်ယူလိုက်တာ ချက်ခြင်းပြန်ရပါတယ်.....
၂) “My Account is Compromised” ဆိုတဲ့ လင့်ကို နှိပ်ပါ....
၃) ကိုယ့် account နဲ့ Register လုပ်ထားတဲ့ အီးမေးလ် ဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းနံပါတ် ဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် Facebook မှာတင်ထားတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့နာမည် အပြည့်အစုံ ထည့်ပြီး Search လုပ်ပါ.....
၄) ရှာတွေ့ရင် နဂို မူရင်း password ကို ထည့်လိုက်ပါ....
၅) မှန်တယ်ဆိုရင် Facebook ကနေ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မေးခွန်းတစ်ချို့ မေးပီးတော့ account ကို Password ပြောင်းခိုင်းပါလိမ့်မယ်.... Continue နှိပ်ပါ.....
၆) Password အသစ်အား ပြန်ရိုက်ထည့်ပါ..... ၂ ခါရိုက်ထည့်ရပါမယ်...... ဒါဆိုရင် သူများ ခိုးသွားတဲ့ ဒါမှမဟုတ် Hack ခံလိုက်ရတဲ့ အကောင့်ထဲကို ပြန်ဝင်လို့ ရပါတယ်.....
တကယ်လို့ အကောင့်ကို ဖုန်းနဲ့ပါ လုံခြုံရေး ရယူထားရင်တော့ Password recovery လုပ်ချိန်မှာ ဖုန်းဘေးနားမှာ ရှိနေဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်....
ဒါမှ ဖေ့ဘွတ်က ပို့ပေးတဲ့ SMS Verification Number ကို လက်ခံရရှိပီး ဆက်လုပ်လို့ရမှာပါ......
Delete all posts that insult 969 . You can delete the post that insult 969 by moving your mouse arrow to the right upper corner of post and you will see down arrow and then you click down arrow and you will see delete. Then click the delete. Your unwanted post will be deleted.
2mz (နည်းပညာစုစည်းမှု) နှင့် လှုမှုကွန်ယက် မှကူးယူတင်ပြပါသည်။
<center><a href="http://mgkaihtoo.blogspot.com/" style="background-color: white;" target="_blank"><img style="width: 240px; height: 165px;" src="http://i49.tinypic.com/2cmvkma.jpg" /></a></center>
ဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ခဏခဏလာမေးကြလွန်းလို့ ဒီ Post လေးကိုတင်ပေးလိုက် တာပါဗျာ။ Window xp , Window7, Wind...
ကဲကဲ..Facebook မှာကိုယ်သုံးတဲ့ password ကို ပြန်မကြည့်ချင်ကြဘူးလား Firefox မှာတော့ကြည့်လို့ရပါတယ် ခင်ဗျာ Add on လေးတခု့ထည့်ပေးရ...
တော်တ်ာကောင်းတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ပဲ သူငယ်ချင်းတို့စမ်းကြည့်ပါ။ credit from facebook wai lin / patty rubin / taylaymalay soe
၂၀၁၂ဒီဇင်ဘာလအတွက် ၇ ရက်သားသမီး ကံကြမ္မာ ဟောစာတမ်း
ကျနော် http://www.mmcfamily.org/ ကနေ shared ယူလာတာပါ။ တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် ခရီးတို ခရီးရှည်များ သ...
သူငယ်ချင်းတို့ဒီလို ►►►♥♥♥ play ပုံတွေအသည်းပုံတွေရေးချင်ရင် မသိသေးတဲ့လူအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်နော် ကဲစရအောင် ပထမဆုံး windows start menu ကို clic...
andriod ဖုန်းတွေ root လုပ်ထားပြီး မြန်မာစာထည့်ရအောင် ဒီမှာသွားကြည့်ပါ
အနာဂတ်ကောင်းကင် / အမျိုးကောင်းသားဆိုဒ်ကနေ ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်လုပ်ဆောင်ချက်တွေကလည်းရိုးရှင်းပါတယ် ဂီတာတီးတတ်တဲ့သူငယ်ချင်းေ...
SAMSUNG GALAXY OFFICIAL FIRMWARE-(2)
မြန်မာနိူင်ငံတွင်လူသုံးများတဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစားများတွင်ပါဝင်သော SAMSUNG GALAXY device အတွက် Official Firmware တွေကိုအလွယ်တကူ ဒေါင်းလော့...
ဖုန်းတွေမှာ အသံတွေကိုမိမိစိတ်တိုင်းကျချိန်မယ်-Volume Ace v3.3.4 Apk
Android ဖုန်းမှာ အသံတွေကိုမိမိစိတ်တိုင်းကျချိန်ဖို့ Volume Ace v3.3.4 Apk ကိုတင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးကတော့အရမ်းလန်းပါတယ်ဗျာ design ...
Zawgyi-One Flip Font New Version ( Support Android 4.2.2 and 4.3 )
Android မှာ Font စတိုင် လှလှလေးတွေနဲ့သုံးလို့ရအောင် Zawgyi Flip Font ကိုသုံးခဲ့ကြပါတယ်.. အဲဒီတုန်းက Android 4.1.2 ထိသာ Support ပေးတဲ့အ...
10 များမှာ Myanmar Font & Keyboard
bat file Tools
imobile offical Firmware
mon font keyboard
mon keyboard ios
Myanmar Unicode Android
SAMSUNG GALAXY OFFICIAL FIRMWARE
Smart Zawgyi Pro (Android Version)
USB Drivers များ
Windows7တင်နည်းစာအုပ်
iOS7မှ iOS 7.0.4 အထိ Jailbreak လုပ်နိင်သော Evasi...
Recovery Mode ဝင်ဖို့ တွဲနှိပ်ရမယ့် Key ခလုတ်နဲ့ ဖ...
Internet Download Manager 6.18 Build 11 Full Versi...
ကွန်ပြုတာအတွက် Zapya (Beta)
BANGAN KEYBOARD 3.8.1(CRACK VERSION)
Wondershare MobileGo for Android 4.2.0 + Patch (27...
QR Droid code Apk 5.4.3 !!! Free Apk
Facebook မှာ အကောင့်ခိုးခံရတယ်၊ Hack ခံရတယ်ဆိုရင် ...
WebcamMax 7.8.0.2 ( For PC )
Cshare Beta V 1.0.0 For Android
Computer အတွက်လုပ်ဆောင်သင့်သောနည်းလမ်းများ (၅)
Tubemate V 2.0.9.525 For Android(Latest Version)
Android 4.1 နှင့်အထက်ဖုန်းများအား မြန်မာစာမှန်ကန်စ...
Zawgyi-One Flip Font New Version ( Support Android...
WIFI Password v1.1 for android
Android ဖုန်း/Tablet တွေကို Root လုပ်ဖို့ WRoot
Mac Theme For Windows 7, Windows 8 And Windows XP
SC Secret Recorder v1.0.11 Apk 2MB
iPhone Music – iOS7Music v1.1 Apk 2.5MB
Samsung ဖုန်းတွေမှာ ပိုက်ပိုက်နဲ့ ဝယ်ရတဲ့ Font Sty...
ဂီတဝါသနာရှင်များတွက် Ultimate Guitar Tabs & Chords...
Root Explorer v3.1.3 APK
Deep Freeze Standard 7.70.020.4460 Full Version
TTPod music player v 6.4.0 for android(latest vers...
Myanmar Calendar 2014 v1.0 Apk 1MB
Camera Fv5v1.58 Full Apk 3MB
Copyright © 2011 mgkhainghtoo | Powered by Blogger